Etu esi eji Social Media Enyemaka Gị | Martech Zone
N'iburu mgbagwoju anya nke mgbasa ozi mgbasa ozi, ngwaọrụ, na nyocha, nke a nwere ike ịdị ka ọkwa elementrị. Ọ ga-eju gị anya na ọ bụ naanị 55% nke azụmaahịa na-eji usoro mgbasa ozi eme ihe maka azụmaahịa.
Ọ dị mfe iche na mgbasa ozi mmekọrịta dịka ihe na-abaghị uru maka azụmahịa gị. Site na mkpọtụ niile dị ebe ahụ, ọtụtụ azụmaahịa na-elelị ike azụmaahịa mmekọrịta ọha na eze, mana mmekọrịta mmadụ karịrị nnọọ tweets na foto pusi: Ọ bụ ugbu a ebe ndị ahịa na-aga ịchọ ngwaahịa na ọdịnaya, soro ma soro ndị ọkacha mmasị ha, echiche ndị mmadụ. iji nweta nkwanye na ntughari aka, ma kesaa ọdịnaya na netwọkụ ha. Placester
Maka ndị ahịa na-eji usoro mgbasa ozi mmekọrịta, ihe dị mkpa 92% nke ndị na-ere ahịa na-egosi na mgbasa ozi mmekọrịta dị mkpa maka azụmahịa ha, site na 86% na 2013 - dị ka Onye nyocha Social Media Akụkọ Mgbasa Ozi Ahịa na Mgbasa. N'ozuzu, a na-atụ anya ka mmefu ego nke mgbasa ozi na-elekọta mmadụ okpukpu abụọ n'ime afọ 5 sochirinụ!
N'ụzọ dị ịtụnanya, anyị anaghị asọ onye ọ bụla ahịa ka ọ maba n'ime mgbasa ozi mmekọrịta. Anyị anaghị eme ya n'ihi na anyị na-ahụkarị na ha enweghị ntọala ndị ọzọ maka ọnụọgụ ha n'ịntanetị. Ha enweghị saịtị kachasị nke na-agagharị na ya. Ha enweghị usoro mmemme iji na-ekwurịta okwu mgbe niile. Ha enweghi ikike ịbanye nleta na ntụgharị. Ma ọ bụ ha enweghị ikike maka onye nleta weebụsaịtị iji nyochaa saịtị ha ma chọta ozi ha chọrọ.
Mgbasa mgbasa ozi bụ usoro nkwukọrịta, ọ bụghị naanị usoro ọzọ iji kwughachi mbọ ị na-agba ahịa. Enwere ndị na-atụ anya na ndị na-ege ntị na ị ga-anabata, na-akwụwa aka ọtọ, ma na-enye aka site na mgbasa ozi mmekọrịta. Y’oburu n’inwe ike ime nke a, inwere ike ime ka mgbasa ozi mmekọrịta di uto maka ire ahia, ire ahịa, nzaghachi, na ime ka iru gị dịkwuo elu. Ndị ụlọ ọrụ na-echekarị na ịmalite ụlọ ọrụ na Facebook bụ mgbasa ozi mmekọrịta - mana enwere ọtụtụ ihe gbasara atụmatụ mmekọrịta mmadụ:
Ikike Iwu - Ọ bụrụ n’ịchọrọ ka a mata ma kwanyere gị ugwu n’ụlọ ọrụ gị, inwe nnukwu mgbasa ozi mmekọrịta dị oke egwu.
na-ege ntị - Ọbụghị naanị ndị mmadụ na - agwa gị okwu na soshal midia, ọ bụ ndị mmadụ na - ekwu maka gị dị mkpa. A nlekota oru atụmatụ a di nkpa iji chota mkparita uka banyere gi nke odighi abanye n’ime gi yana echiche zuru oke nke ika, ngwa ahia na aka gi.
Communication - Na - ada ụda nke ọma, mana ijide n’aka na ị ga - eji ọwa ebe ndị mmadụ na - ege ntị dị mkpa. Y’oburu n’inwere ozi di nkpa ma obu nkwado ihe banyere ulo oru gi, uzo gi n’abia ka o buru gi nma imezu ihe n’iru gi.
Ndị ọrụ nlekọta ndị ahịa - Ma ị kwenyere na mgbasa ozi mgbasa ozi gị bụ maka nkwado ndị ahịa adịghị mkpa… ha bụ! Na ha bụ ọwa ọhaneze ka ike gị dozie nsogbu ndị ahịa na-eweta ngwa ngwa ma na afọ ojuju ga-enyere mbọ ịre ahịa aka.
Ego na ọpụrụiche - Ọtụtụ mmadụ ga-edebanye aha ma ọ bụrụ na ha mara na ohere ga-abụ maka ịnye naanị ha, ego, Kupọns na ego ndị ọzọ.
Ụmụ mmadụ - Akara, akara ngosi na slogans anaghị enye nghọta dị ukwuu n'ime ụdị ika, mana ndị gị na-eme ya! Ọnụnọ mgbasa ozi gị na-enye ndị na-eso ụzọ gị ohere ịhụ ndị nọ n'azụ ụdị ahụ. Jiri ya!
Tinye Uru - Gị na-elekọta mmadụ mmelite na-adịghị mgbe niile ga-abụ banyere gị! N’ezie, o nwere ike ha ekwesịghị ịdị na-eche banyere gị mgbe nile. Kedu ka ị ga - esi tinye uru na ndị ahịa gị. Ikekwe enwere akụkọ ma ọ bụ isiokwu dị na saịtị ọzọ nke ndị ahịa gị ga-enwe ekele… ịkekọrịta ya!
Ihe omuma a site na Placester na-enye ụfọdụ ndụmọdụ siri ike maka ụlọ ọrụ na-achọ ịmalite itinye aka na Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+ na nyiwe mmekọrịta ndị ọzọ. Ihe omuma ihe omuma na-ejeghari onye oru site na ihe ndi ozo na-eche anya, imeputa akwukwo profaịlụ gi, na otu esi emepe usoro nkwukọrịta gi ka ị ghara ida dika onye ochichi!
Tags: mepụta profaịlụ mgbasa ozimepee usoro mgbasa oziole ka mmelite facebook dịawa ole na social mediaolee otú ọtụtụ ndị na-elekọta mmadụ media mmeliteole ka mmelite twitter dịotúotu esi eji social mediatinyeelekọta mmadụ mediaSocial Media Marketingusoro mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta
Ọkt 6, 2014 na 7:49 AM
Social media bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ dị mkpa na ụwa ntanetị taa. Ọ bụrụ na ọnweghị ihe ọzọ profaịlụ mgbasa ozi mmekọrịta nke ọma ga-ewulite ntụkwasị obi na ntụkwasị obi nye ndị ahịa gị. Na ọtụtụ saịtị dị ebe ahụ, ndị na-azụ ahịa chọrọ inwe ntụkwasị obi na ụlọ ọrụ ha na-azụ ahịa. Ọ bụrụ na ị nwere profaịlụ mgbasa ozi mmekọrịta siri ike na ndị na-eso ụzọ na mmelite dị mma ọ ga-ewulite ntụkwasị obi ozugbo maka ndị ọbịa gị.
Ọkt 8, 2014 na 7:45 AM
Akwa post. Teknụzụ enwegoro nke ọma na nke a, ndị na - emepụta ihe nwere ike ịgwa ndị ahịa ha okwu n'ụzọ dị mfe ma dịkwa ọsọ karịa ma e jiri ya tụnyere oge gara aga. Mgbasa mgbasa ozi ọha na eze na-arụ ọrụ kachasị mkpa iji ruo ndị mmadụ aka nke ọma na ọnụ ahịa dị irè. Iji gbakwunye na ndepụta gị, Ọ ga-aka mma ịdị na-agbanwe agbanwe na saịtị niile nke mgbasa ozi mmekọrịta, n'ihe gbasara onyonyo, foto profaịlụ, akara agba, na ozi. Nke a ga - eme ka ndị ọrụ nwee mmetụta na ha nọ n’ebe ziri ezi ma hapụkwa echiche na ọ nwere ike ịme njirimara gị. Daalụ maka ịkekọrịta.
Mee 30, 2016 na 9: 19 AM
Daalụ maka ozi ahụ. Mgbasa mgbasa ozi bụ nke a na-apụghị ịgbanwe agbanwe maka ọtụtụ ụlọ ọrụ na ọkachasị ụlọ ọrụ n'oge a. Companieslọ ọrụ B2C na-adabere n'ịbịaru ndị na-ege ha ntị na-etolite etolite na itinye aka ngwa ngwa na nke ọma Ngwaọrụ dịka Buffer, Hootsuite na Socialhub.io bụ ihe dị mkpa maka nke a. Ọgbọ mgbasa ozi na-esote bụ mkparịta ụka na iji ngwá ọrụ ọgbara ọhụrụ maka nke a nabata nke a nwere ike ịmepụta oke uto.